Soo-saareyaasha budada Soo-saare ee Raw Mesterolone (Pro ayika) & Shirkadaha - Warshadaha
Sidoo kale, loo yaqaan 'Mesterolone' (Proviron) budo waa sterootide oo ah endogenous androgen oo laga qaado afka. Waxay markii ugu horreysay u muuqatay in loo isticmaalo daawada 1934 inay tahay daroogo kor u kaca iyo daroogada niyadjabsan. Laakiin jir-dhiseyaasha iyo ragga ragga qaada testosterone waxay u arkaan inay si aad ah uga faa'iideysan karto waaxda galmada. Kalluunka loo yaqaan 'Proviron powder' ayaa si weyn u caan baxay oo loo yaqaan 'steroids' iyadoo la adeegsanayo kor uqaadayaasha iyo cayaaraha si kor loogu qaado nolol caafimaad qaba.
Video Root Mesterolone (Proviron) video (1424-00-6)
Macdanta Root Mesterolone (Proviron) (1424-00-6) Sharaxaad
Daawada Raw Mesterolone (Proviron), oo lagu iibiyo magaca shirkadda Proviron ee ka midka ah, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo badanaa lagu isticmaalo heerarka hoose ee testosterone. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhalmo la'aan, inkastoo adeegsigaan uu yahay muran. Waxaa la qaadaa afka.
Budada loo yaqaan 'Raw Proviron' waxaa loo adeegsadaa daaweynta yaraanta cunnooyinka ee ku jirta labka (hypogonadism), dhiig-yaraan, iyo taageerida bacriminta labka ah ee calaamadaha kale. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo gabdhaha da'da yar ee wiilasha. Maadaama ay ka maqan tahay saamaynta estrogenic, budada Raw Mesterolone (Proviron) waxaa lagu tilmaami karaa daaweynta xaaladaha yaraanta iyo quudinta ee naaska naaska ama ginecomastia. Daroogada waxaa lagu sharaxay inay tahay mid aad u daciif ah oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa qayb ahaan, waxaana si dhif ah loo isticmaalaa ujeedada daaweynta beddelidda, waxaana weli loo adeegsadaa daawada.
Dufanka Mastarooniga ah (Proviron) (1424-00-6) Smamnuucista
Product Name Biyo mastaroon (Proviron)
Magaca Kiimikada Proviron, kuwo kale
brand NAme taariikhda No
Miisaanka kelli 304.474 g / mol
dhoola O = C4C [[Email ilaaliyo]@H] 3CC [[Email ilaaliyo]@H] 2 [[Email ilaaliyo]] (CC (CC) [[Email ilaaliyo]] 1 (C) [[Email ilaaliyo]Haa (O) CC [[Email ilaaliyo]] 12) [[Email ilaaliyo]@] 3 (C) [[Email ilaaliyo]@H] (C) C4
Dhibicda Biyaha 204 ° C
Sharaxaadda Jirka Solid
Application Proviron waa magac ganacsi / calaamad ah forrogen oo loo yaqaan 'Raw Mesterolone' (Proviron) budada. Waa wax soo saarka afka ah, loomana tixgeliyo steroid anabolic.
waa maxay Budada mastarooniga ah (Proviron) (1424-00-6)?
Proviron, magaca calaamadda mesterolone, waa nooca synthetic ee hormoonka galmada lab ah. Mesterolone, oo loo yaqaan '1-methyl-5? -Hidrototestosterone (DHT), waa methylated (ku darida mitirka methyl -CH3) taasoo ka dhigaysa steroid firfircoon oo la mid ah DHT dabiiciga ah oo aan u badalin estrogen ama progesterone hormoonnada) hal mar jirka ah. Budada Proviron waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan oo jidhka ka mid ah, oo ay ka mid yihiin kordhinta muruqyada sii kordhaya, xoojinta heerarka testosterone iyo daaweynta xinjirnimada galmada ragga.
Sidee budada mastaroonta ah (Proviron) (1424-00-6) shuqullada
Isticmaalka maadada loo yaqaan 'Proviron powder' ee adduunka caafimaadku waa in lagu daaweeyo cillado is-gooyo oo inta badan saameeya da'da. Daawada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii bacriminta iyo kahor-barbaarinta ragga, taas oo ka dhigaysa budada Proviron ah steroid aad u faa'iido badan oo saameyn ku yeesha jidhka bini'aadamka. Jimicsiga iyo ciyaartoyda kale ayaa sidoo kale isticmaala awoodda daroogada si ay uga caawiso inay yeeshaan muruqyo adag isla markaana kor u qaadaan heerarka hoormoonka testosterone.
Kalluunka Proviron waa dihydrototestosterone oo loo yaqaan 'staboid anabolic', waana qaab beddelaad leh hormoonada DTH oo leh ekeyn methyl group oo leh hal boos. Tani waxay u sahlanaataa hormoonka inuu ku noolaado cunidda afka laga qaato tan iyo markii laga ilaaliyo khalkhalka cawska.
Dufanka Mastarooniga ah (Proviron) (1424-00-6) Qiyaasta
Daawada keli ah ee 25mg ayaa qaadatay saddex jeer maalintii (wadarta guud ee 75mg maalintii) waxaa loo isticmaalaa bilowga daaweynta, iyadoo la raacayo hoos u dhigista qiyaasta daaweynta hal kiniini 25mg maalintii. Marka lagu daaweynayo ilmo aan dhalmo lahayn, qiyaaso isku mid ah ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa, inkasta oo daawooyinka kale ee bacriminta kor u qaada ay sidoo kale la socdaan weheliyaan Proviron.
Marka laga hadlayo jir-dhisayaasha iyo cayaartoyda, Proviron waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa 50 - 150mg maalintiiba si loo xakameeyo heerarka Estrogen, yareeyo sii-haynta biyaha (oo keena estrogen), ama kordhinta bacriminta ka dib dhammaadka wareegga.
Inkasta oo Proviron aan loo oggolaan in loo isticmaalo dheddigga, dumarka qaarkood ee jimicsiga iyo jismi-dhiska jirka ayaa doorta inay isticmaalaan. Xaaladdan oo kale, hal qiyaasta Proviron ah ee 25mg maalin kasta ayaa ku filan si loogu bedelo muuqaalka jirka. Tani waa in la sameeyaa aan ka badnayn toddobaadyada 4 - 5 si looga fogaado waxyeelada dilaaca.
Biyaha Mastarone (Proviron) Root (1424-00-6) faa'iidooyinka
Daaweynta Qalitaanka Cawaaqibka
Sida lafdhabarta badan ee anabolic, jilicsanaanta galmada waxay noqon kartaa arrin dib-u-dhac ah oo u muuqda inaanay waligeed tagin haddii aan la joogin. Dhaqdhaqaaqa dhaqsaha badan ee hoormoonada jirkaada ee ku dhaca steroids waxay kaa tagi kartaa inaad deldesho marka ugu muhiimsan ee qolka jiifka.
Noqo mid xooggan
Inkastoo ay sii kordheyso tijaabada, bacriminta labka ah ayaa si weyn loo hagaajiyey sidoo kale Proviron. Laakiin si cad, budada Proviron ma kordhiso mugga semen. Maadaama shahwada iyo shahwadu ay yihiin laba waxyaabood oo kala duwan, waxaa laga yaabaa in ay fududahay in lagu qaldo. Semen waa waxa dhabta ah ee ukumaha haweenka. Dhanka kale, shahwadu waa gaadiidka u oggolaanaya shahwada in uu ku dabaasho meesha ugu dambaysa.
Iftiin wanaagsan, budada Proviron waxay gacan ka geysan kartaa in uu nin ugu dambeyntii ku guulaysto oo uu u bilaabo qoyska isaga iyo lammaanihiisa. Maalmaha la sugayo in la dhageysto iyo haddii aan la helin imtixaanka uurka ama inaysan sugin wax dheeraad ah. Abuuritaanka sambabada bacrimiga ah waxay noqon kartaa mid sahlan sidii loo buuxin lahaa qiyaas ku filan oo Proviron ah oo ku yaal steroidskaaga.
Baaskiilada tijaabada ah
Sida badanaa steroids anabolic, budada Proviron ayaa sidoo kale bixisa korodh ku raali noqda baaritaanka testosterone.
Hoos ka dhig naasaha labka ah
Sida badan oo ah steroids aad u xooggan oo korriin ah, horumarinta naasuhu waxay noqon kartaa walaac weyn oo loogu talagalay jirka jirka. Mahadsanaan leh budada Proviron, naasaha haweenku waxay noqdaan wax muujinaya. Kaliya muruqyada adag, muruqyada cufnaanta ayaa laga arki karaa halkii laga heli lahaa faashad iyo dufan naaso ah.
Waxaad iibsataa mastaroon (Proviron) budada laga bilaabo Buyaas.com
Wax walba oo aad ka ogaanayso Proviron ee jirka dhismaha
De Souza, GL, & Hallak, J. (2011). Cudurrada anabolic and infertility male: dib u eegis dhamaystiran. Caalamiga ah BJU, 108(11), 1860-1865.
El Osta, R., Almont, T., Diligent, C., Hubert, N., Eschwège, P., & Hubert, J. (2016). Isticmaalka qaloocbaha ee Anabolic and infertility mal. Astaamaha aasaasiga ah iyo daaweynta, 26(1), 2.
Angell, PJ, Green, DJ, Lord, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Jawaabaha wadnaha oo si tartiib tartiib ah loogu jimicsado jimicsiga dadka isticmaala stabdhabka anabolic: Baaritaan hordhac ah. Sayniska & Isboortiga, 33(6), 339-346.